Indlela iAthene eyadlala ngayo indima ebalulekileyo kwimbali yesiGrike
Imbali kunye neNkcubeko IGrisi & Sparta
Ukubaluleka kweAthene kwimbali yesiGrike.
Isahluko 1 no-2 Usuku e-Old Athens, ngoProfesa William Stearns Davis (1910)
Isahluko I. Ukumiswa Kwezinto Eziphathekayo zaseAthene
1. Ukubaluleka kweAthene kwimbali yesiGrike
Kwintlanga ezintathu zasendulo amadoda ekhulu lama-20 anetyala elingenakulinganiswa. AmaYuda sinezona nkcukacha ezininzi zonqulo; KwabaseRoma sineemvelaphi kunye nemimiselo emthethweni, ukulawulwa, kunye nokuphathwa ngokubanzi kwemiba yabantu esoloko igcina impembelelo nexabiso; kwaye ekugqibeleni, kumaGrike asinayo yonke ingcamango yethu malunga nezinto ezisemgangathweni zobugcisa, uncwadi kunye nefilosofi, eqinisweni, phantse ubomi bethu bobuchopho.
La maGrike, nangona kunjalo, iimbali zethu zifundisa ngokukhawuleza, azizange zenze isizwe esisodwa esisinyanisiweyo. Bahlala "kwiidolophu" ezininzi ezingabalulekanga kangangoko, kwaye ezinye zezona zikhulu kakhulu zinegalelo elikhulu kakhulu kwimpucuko yethu. U-Sparta , umzekelo, usishiye izifundo ezintle kwiindawo ezilula kunye nokuzinikela ekuthandeni ubuzwe, kodwa kungeyona nto imbongi enkulu, kwaye ngokuqinisekileyo ayizange ibe ngumfilosofi okanye umdwebi. Xa sihlolisisa ngokucacileyo, sibona ukuba ubomi obuphucukileyo baseGrisi, ngeenkulungwane zeenkulungwane xa wayefezekisa kakhulu, bekunye ngokukhethekileyo e-Athene. Ngaphandle kweAthene, imbali yeGrike yayiza kulahlekelwa ezintathu zintathu zokubaluleka kwayo, kwaye ubomi benamhlanje kunye nengcamango yayiza kuba yihlwempu.
2. Kutheni Ubomi boLuntu baseAthene bubaluleke kangaka
Ngenxa yoko, iminikelo yaseAthene ebomini bethu ibaluleke kakhulu, kuba bayathinta (njengokuba isiGrike sithetha) phantse kuwo onke amanqaku "okwenyaniso, entle, kwaye entle," kuyacaca ukuba izimo zangaphandle phantsi kwaloo mandla we-Athene ophuhlisiwe, sifanele siwahloniphe.
Kuba ngokuqinisekileyo abantu abanjalo njengoSophocles, Plato , kunye neFidiya babengabonakaliyo izidalwa, abaye bahlakulela ingqondo yabo ngaphandle kwayo, okanye nangona kunjalo, ubomi malunga nabo, kodwa kunokuba zizinto ezivuthiweyo zentlalo, ekugqibeleni kwayo kunye nokubuthathaka. ezinye zeempawu ezinomdla kakhulu kunye nemizekelo ehlabathini.
Ukuqonda impucuko yase-Athene kunye nobuchule akwanele ukwazi umlando wangaphandle wamaxesha, iimfazwe, imithetho, kunye nabagwebi. Sifanele sibone iAthene njengomntu oqhelekileyo ekubonayo kwaye ehlala kuyo imihla ngemihla, kwaye mhlawumbi sinokuqonda ngokucacileyo ukuba kwakungakanani ngexesha elifutshane kodwa elimangalisayo lokukhululeka kwe-Athene kunye nokuphumelela [*], iAthene yakwazi ukuvelisa Amadoda amaninzi alawula umongameli ukuba azuze indawo yakhe kwimbali yempucuko engakwazi ukuyilahleka.
[*] Ixesha elinokuthi lithathwa ukuba liqale ngokulwa neMarathon (490 BC), kwaye ngokuqinisekileyo yaphela ngo-322 BC, xa iAthene idlula ngokugqithiseleyo phantsi kwegunya laseMakedoni; nangona ebudeni beChaeroneia (338 BC) wayenokwenza okungakumbi kunokugcina inkululeko yakhe ekuhluphekeni.
Bucephalus Ngaba Ihashe likaAlexandro Omkhulu
UKumkani uLeonidas waseSparta kunye neMfazwe e-Thermopylae
Alcibiades Jikelele weMfazwe yasePeloponnesian
Indlela i-Athenian yentando yeninzi eyenziwe ngayo kwiindawo ezi-7
Yintoni eyayiyityhola iSocrates?
Ubume be-Battle of Issus ngo-333 BC
I-Sparta - Ukuphakama kwiMandla eSparta
Ukuguqulwa kweSolon kunye nokuphakama kwentando yeninzi eAthene
AmaMammoth kunye neMastodon - Izindlovu zasendulo ezidlulayo
Iikhompyutheni zengqondo zeKholeji
ILayibrari ye-6 ye-Piano Chord
Ubomi bam Besikhokelo somsebenzi wabantwana
Ukuqulunqa iSicwangciso soQeqesho seNkxaso yeSikolo esiPhakamileyo saBafundi
Ithempeli yeeNkcazo ePalenque
I-Granite State College
Izinto ezi-7 ezintsholongwane zamaKristu zinokubulela kulo nyaka
I-Anti-Gun Memes kunye neeCononons
Iprofayile yeRage Against Machine
Iingcamango zobomi bokuqala: I-Soup Primordial Soup
Ukusebenzisa i-Shelve ukugcina izinto kwi-Python
La Navidad: Indawo yokuqala yaseYurophu eMelika
Ukuguqula Amakhilogremu Ngama inch square okanye i-PSI kwi-Atmospheres
I-Model's Top Tiffany Ithetha Ngeentetho zeBhanki zeTyra
Iphrofayli kunye ne-Biography yama-Saint Saint-Katolika ase-Roma
IHockey Print Printable
Uluphi uhlobo lobubi kwiZibhalo?
Ukwakhiwa kweZakhiwo zeNkcazo zenziwe: Ingxaki yokuLahla isidumbu seNkathazo, iNxalenye I
Ingqwalaselo yokuLondolozwa kweMbali